सोह्र श्राद्धमा किन खान हुँदैन लसुन प्याज र माछामासु ? – ताजा समाचार
सोह्र श्राद्धमा किन खान हुँदैन लसुन प्याज र माछामासु ?
हिन्दूधर्मालम्बीहरुले शनिबारबाट सुरु भएको सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत आफ्नो पितृको तिथिअनुसार श्राद्ध गरिरहेका छन् । हिन्दु धर्मग्रन्थका अनुसार श्राद्ध पितृका लागि गर्नुपर्ने एक महत्वपुर्ण अनुष्ठान हो।
विधिपूर्वक श्राद्ध गरेमा मात्र पितृले मुक्ति पाउने विश्वास छ। यस क्रियाले पितृहरुको सम्मान मात्र नभएर भगवान र ऋषिमुनि तर्फको आदर र सम्मानलाई पनि जनाउँदछ। श्राद्धको अनुष्ठानले नै गर्दा पितृको आत्मा बिस्तारै भगवानको नजिक पुग्न सहायता गर्दछ। त्यसैगरी यस अवधिभर पितृको मुक्ति र उनीहरुको सम्मानका लागि लसुन, प्याज तथा माछामासु खान प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
हिन्दु ग्रन्थ तथा प्राचीन आयुर्वेदका अनुसार खानालाई तीन प्रकार ( राजसिक, तामसिक र सात्विक)मा विभाजन गरिएको छ जसले मनुष्यको स्वभाव र प्रकृतिलाई निर्धारण गर्छ। यसर्थ यस अवधिभर पितृहरुका लागि समर्पित हुन तामासिक खाना (प्याज, लसुन, गाेलभेडा अण्डा तथा माछामासु र मदिरा) वा सडेगलेका खाना र फलफूलको सेवन गर्न नहुने भनिएको छ ।
यस अवधिमा तामासिक खाने कुरा खाएमा पितृको आत्मा स्वतन्त्र हुन नपाउने र मुक्तिमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै पितृ दोष लाग्ने धार्मिक विश्वास छ।
त्यसैगरी, हिन्दू शास्त्रका अनुसार तामासिक भोजनले शरीरको तापक्रमलाई बढाई नकारात्मक उर्जा वा उत्तेजना प्रदान गर्दछ। पितृको आराधना गर्दा शान्त र शुद्ध मनले गर्नुपर्ने हुनाले यस प्रकृतिका खानाले मानिसको इन्द्रियलाई नकारात्मक प्रभाव पारि पितृ एकाग्रतामा लागेको मनलाई विचल्लित पार्ने जनविश्वास छ।
पितृ पूजा वा श्राद्ध पछि प्रसाद वा खानकुरा सबै भन्दा पहिला भगवान विष्णुलाई भोग लगाइन्छ अनि मात्र ब्राह्मण र आफूले खानु पर्दछ। यस अवधिमा यस्ता तामासिक तथा राजसिक खाना खानु पाप मानिन्छ। श्रीमद्भागवत अनुसार श्राद्ध कालमा यस्ता खाने कुरा खाएमा अधर्मको रुपमा हेरिन्छ।